Maxaa siyaasiyiin badan oo Somaliya oo is khayaantay, doorashada kadib ay Baararka isku wareeysan doonaan=Nasashada Jimcaha.Q-163aad= - Latest News Updates
Maxaa siyaasiyiin badan oo Somaliya oo is khayaantay, doorashada kadib ay Baararka isku wareeysan doonaan=Nasashada Jimcaha.Q-163aad=
Wax Akhyaar loogu maah maahana mallehe.
1-Gabar jaamacad ka soo Qalin jabisay ee Shaqada weysay, ayaa shaqo ka heshay Makhaayad Xaafadda ku taal, Milkiilihii ayey ku tiri: Dhulka ayaan nadiifinayaa, Canjeeradana waan dubayaa, laakin ma rabo in la i ogaado, Kushiinka makhaayadda irida gadaalo ayaan ka soo galayaa ,wajigana waan daboolanayaa oo indha shareerka furi maayo. Maalintii dambe ayaa indhashareerkii ka dhacay.
Gabar kale oo la shaqeyneysay ayaa aragtay wajigeeda oo ku tiri: Abaayo ha nixin, Anniguba waxaan ahay Dufcadii kaa horeysay ee Jaamacda ka soo qalin jabisay. ( F.S: 1aad)
(War Gabdhuhu inay Canjeero dubaan ceeb ma ahan gurigoodaba waa ku dubaan, xirfadii ey u soo barteen in ey Bulshada ugu shaqeeyaan aawday?. Shaqa abuurkii 5000 ee Arady Aaway?. wasaardaii Shaqada Qorshaheedii aaway?. Booskoodii ma waxaa galay mid Qurba ka timid oo ku mushaar ah 20 Jaamici iyada oo aan aqoon hoowsha laga rabo?)
2-Laba Nin oo Qabriyadoodu isku dhaganaayeen ayaa Jimcihii ugu horeeyay is wareeystay. Mid ayaa ku yiri: Adigu Sababteed u Geeriyootay? Kii kale ayaa yiri: Anniga qaboow i qalijiyay dartii ayaan u dhintay. Kii kale ayuu ku yiri: Adiguna sabateed u dhimatay? Waxa uu yiri: waxaan ahaa nin Maseyr badan ,wadna xanuuna qabo. Maalin ayaan si kadis ah Guriga ku imid Anniga oo soo orday, Jaranjarta kore ayaan orod ku koray, waxaan ugu tagay Xaaskeeygii oo kaligeed iska hurudo. Hoos ayaan u soo orday, qol kasta ayaan orod ku galay, daaqadaha iyo meel kasyta ayaan fiiriiyay, waxba waan waayay Jaranjartii kore ayaan haddana ku orday, wadnihii ayaa i istaagay sidaa ayaan ku dhintay.
Kii kale ayaa yiri: Haddii markii aad timid Gurigaaga, aad qaboojiyaha ka furi leheeyd, Maanta labadeenuba waan noolaan leheeyn. ( F.S: 2aad)
( Maxaa siyaasiyiin badan oo Somaliya oo is khayaantay, doorashada kadib ay Baararka isku wareeysan doonaan)
3- Haweeneey ayaa tagtay Isbitaalka, waxa ey la kulantay Haweeney Dhakhtarad ah, waxa ey ku tiri: Waxaa aan dhibaato ku qabaa Ninkeeyga oo waxa uu rabaa in uu habeen kasta ii tago, Aniguna Xaamilo ayaan ahay Jimcaha iyo Isniinta oo kaliya ayaan xamili karaa, waxaan rabaa Daawo aan siiyo.
Dhakhtaradii ayaa ku tiri: Numbarkeeyga sii. ( F.S: 3aad)
( Shacab ayaa ka dacwooday maamul Gobaleed. Waxaa la yiri: Maamulka Numbarkeyga sii. Shacabkii isma weydiin, annagana maxaad nagu sameynee? Waxa ey ogaatay Xaamiladii markii ey Ubadkii Uurka ku jiray ey Dhicistay, Dhakhtaradii iyo Odaygeediina is fahmeen)
4- Laba Nin ayaa tagay Goob habeenkii lagu caweeyo khamrigana lagu cabo, waxa ey la heshiiyeen Naag , Qolkeeda ayey geeysay. mid ayaa u hor galay, 10 Daqiiqo kadib ayuu soo baxay. waxa uu ku yiri: Saaxiiboow Caawa waan dimbaabay, tan Xaaskeyga ayaaba ka fiican oo ii dhaantay.
Kii kale ayaa u galay ,10 daqiiqo kadib ayuu soo baxay, waxa uu yiri: Saaxiiboow waa runtaa tan Xaaskaaga ayaaba dhaantay. ( F.S: 4aad)
(kuwii Somalida khayaanay ee iyaguna is khiyaanay, ka filo, caweyska & khamriga “Kenya & Itobiya-waxaa noo dhaamay in Nin waliba Dalkiisa ku ekaado oo uu iimaansado)
5-Nin ayaa Naagtiisa oo xaamilo ah Afgoi Dalxiis ugu waday, fool ayaa qabatay, Mundul Umuliso u dhaweyd ayaa la geeyay. Waxa uu yiri Ninkii: Xanuunka Xaaskeyga hayo haddaan la wadaagi karo waan la qeybsan lahaa. Oday la yiraa Siidoow Baxaar ( Sixiroole) oo meesha fadhiyay ayaa yiri: Haddii aad Caleentaan xoog loo qaniinto ,xanuunka foosha ( Xaaska iyo Aabaha) ayaa wadaagayo. Ninkii waa qaniinay 20%, laakin xanuun ma dareemin, Xaaskiina xanuunkii Fooshu waa ka yaraady 20%, waa sii qaniinay 50% Ninkii waxba ma dareemin, laakin Naagtii Xanuunkii Fooshu 50% waa ka yaraaday, haddana waa sii qaniinay 100% Ninkii waxba na dareemin, laakin Naagtii Xanuun la’aan ayey dhashay. Markii xamar loo soo noqday ayaa gurigii loogu yimid, waardiyihii oo xanuun la rafanayay Maanta oo dhan. ( F.S: 5aad)
( Maxaa Masuuliyiin badani ku faaneen howl dad kale ku rafaaday, Siidoow Baxaar ha loo yeero, siyaasiyiin badan ayaa foolan doono)
6- Oday 85 jir ah ayaa u tagay Dhakhtar kuna yiri: waxaan rabaa in aan ogaado in Xubinteyda Taranka Maniyadeeydu ( Biyaha ragu-Sperms) ey weli noolyihiin iyo in kale.
Dhakhtarkii ayaa siiyay “Caag yar” oo daboolan, waxa uu ku yiri: Guriga u qaado ee berri ii keen isaga oo ey ku jiraan Biyaahagu si aan u baaro.
Odaygii ayaa Maalintii xigtay keenay Caagii oo faaruq ah oo sidii loogu dhiibay shalay ah. Dhakhtarkii ayaa yiri: Maxaa dhacay Caagu waa faaruqe?
Odaygii ayaa yiri: Datoore: Waxaan isticmaalay gacanteeyda Midig waxba, haddana tan Bidix waxba. kadib Xaaskeeyga ayaan u yeesay, waxa ey isticmaashay gacanta Midig waxba, haddana tan Bidix waxba, haddana labada Gacmood waxba, haddana Afkeeda waxba, xataa waa qaniintay.
Kadib waxaan u yeernay Gabarta Jaariyada ah iyo Xaliimada deriska ah oo labada Gacmood ku dayday waxba , Afkeey ku dayday waxba, xataa Jilbaheeda ayey dhaxgalisay oo ku maruujisay waxba.
Dhakhtarkii oo yaaban ayaa yiri: Xattaa Deriskaaga, miyaad u yeeratay oo waxab waa la keeni wayay.
Odaygii ayaa yiri: Haa, kuligeen , si kasta haddan isagu daynay, qof Caaga furto ayaa la waayay. ( F.S: 6aad)
(Maxaa rag badan oo howl Qaran loo diray, ay intaan howshiiba la gaarain ay Caagii Furi waayeen, kadibna xilkii lagu dalacsiiyay, Horuumarka Somaliya iga dheh)